Namuhla, ukubukela ibhayisikobho, akudingeki ukuya ebhayisikobho noma esitolo ukuthenga i-DVD-disk ngama-movie. Engingakusho nje ukuthi urekhode-movie wedwa. Indlela bashise disc?
Okokuqala, kudingeka ashise disc ingasetshenziswa esiku-DVD player noma kwi "ekhaya yaseshashalazini." Ngakho indlela ukubuka ama-movie kukhompyutha okungukuthi kwezinye izimo zingavumi kakhulu.
Ukurekhoda movie ku disc, udinga okuthiwa isofthiwe evutha. Ziningi ezinjalo. Nazi ezinye zazo: «Ashampoo Burning Studio», «CDBurnerXP», «uNero», «Astonsoft DeepBurner» nabanye. Sisebenzisa uhlelo elula nge esibonakalayo ehlanzekile - «Ashampoo Burning Studio».
Indlela ushise movie kudiski usebenzisa lolu hlelo? Okokuqala kubalulekile ukufaka kukhompyutha yakho. Uma bazosungula uhlelo, uzobona iwindi. It (ohlangothini kwesokunxele) is babeqoqana uhlu imisebenzi etholakalayo.
Ukuze ukuqopha ama-movie ku disc, sebenzisa umyalo "amavidiyo Record nezithombe" futhi "Burn amafayela namafolda."
"Burn amafayela namafolda" umyalo kulula ukuyisebenzisa, futhi alobe iqalisa ngokushesha. Ngakho-ke, ukukhetha lo myalo. Iwindi livela lapho sithola "Dala entsha CD / DVD drive."
Ithebhu liyavuleka. It ukwengeza movie Ngithanda ukurekhoda. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa inkinobho ethi "Engeza", kuba ngakwesokudla. Noma, unga igundane ukuhudula amafayela sokusebenza.
Ezansi kukhona umugqa ivolumu. Ibonisa isamba amafilimu ukuthi sezivele enawulungiselelwa ukurekhoda. Chofoza "Next".
Ivula ewindini lapho udinga ukukhetha ijubane ukurekhoda. Manje uchofoze inkinobho "Hlela Izinketho." Speed ukhethe hhayi elikhulu. Esikhathini abadlali DVD-ROM, okuyinto has a high ukuqoshwa isivinini kungaba nzima ukufunda.
Khetha okukodwa ijubane ongaphakeme, bese uchofoza "Londoloza". Qala ukuqopha-disc. Isikhathi kuzoncika inani amafayela ijubane ekhethiwe.
Uma ukuqopha kwenziwa, umzimba uyobe ukhulise kusukela idrayivu. umyalezo luvele esibukweni ukuthi zonke kuphothulwe ngempumelelo. Njengoba ubona, akukho eziyinkimbinkimbi mayelana nendlela bashise disk ngosizo «Ashampoo Burning Studio».
Uhlelo «uNero» namanje ethandwa kakhulu. Kuyafaneleka ikakhulukazi, isibonelo, uma uye ngokuvamile igcinwa kwi-hard disk isithombe movie DVD, kodwa hhayi njengoba ifayela .iso, futhi nje njengoba ikhophi ifolda. Futhi ufuna okuqukethwe ifolda irekhodwe ku DVD-ROM. Khona-ke kudingeka ufunde indlela bashise disc, okuyinto umane ukopishwa?
Lapha kulapho, njengoba sekushiwo, ngeke Uhlelo «uNero». Ukuze wenze lokhu, e kuwindo, thola uphawu nge isithombe ifilimu, chofoza kukho. Bese ukhetha "Burn amafayela DVD -. Isiqophi"
Iwindi liyavuleka. Ngakwesokunxele - DVD okumsulwa - ROM. Kwesokudla - okuqukethwe disk kanzima. Vula VIDEO_TS ifolda. Ohlangothini lwesokunene ukhetha amafayela ofuna ukuba ashise futhi abahudulele kuze kufike ohlangothini lwesobunxele. Manje uqala inqubo ngokuchofoza "Burn".
Qopha, njengoba kwaba njalo endabeni yokuqala, kubalulekile ngesivinini aphansi. Makube eside, kodwa okungcono. Uma ukuqopha sekuphelile, umyalezo uzovela, ekwazisa ukuthi uke yimpumelelo.
Manje uyazi ukuthi ukudala i-DVD-ROM movie akunandaba ngempela. Ungakha ngokwakho lonke iqoqo movie ozithandayo. ukusabalalisa imikhiqizo esinjalo singeze sibe nje. Kuyinto yisigwebo umthetho. Ngakho lokho movie-DVD, eqoshiwe siqu sakhe, kumele isetshenziselwe kuphela izinjongo siqu.
Sihlola umbuzo ukuthi ungasetha kanjani iphasiwedi WiFi
Mechanical Engineer - ukushoda ubuchwepheshe emakethe yezabasebenzi!